အရေပြားခြောက်သွေ့ခြင်း ပြဿနာ | OnDoctor
By OnDoctor Editor	 On Sep 12, 2020 Last updated Sep 14, 2020
အရေပြား ခြောက်သွေ့ခြင်းဆိုတာ ဘာလဲ?
အရေပြားခြောက်သွေ့ခြင်းဆိုတာ အရေပြားရဲ့ အပေါ်ယံလွှာမှာ လုံလောက်တဲ့ ရေပမာဏမရှိခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အဖြစ်များတဲ့ အရေပြားပြဿနာ တစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။
အရေပြားခြောက်သွေ့ခြင်း ဘယ်သူတွေမှာ အဖြစ်များသလဲ?
အမျိုးသားများနဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ ဖြစ်ပွားနှုန်း အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့ အဖိုးအဖွားတွေမှာ အရေပြားပေါ်မှာ အဆီထွက်ခြင်း ပိုမိုနည်းပါးသွားသောကြောင့် ပိုပြီးတော့ ဖြစ်ပွားလေ့ရှိပါတယ်။
ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဘယ်နေရာတွေမှာ အဖြစ်များလေ့ရှိသလဲ?
အများအားဖြင့် လက်မောင်း၊ လက်၊ ခြေထောက်၊ ဝမ်းဗိုက်နဲ့ ပွတ်တိုက်မှုများတဲ့ လက်ကောက်ဝတ်တွေနဲ့ ခြေဖဝါးတွေမှာ အဖြစ်များပါတယ်။
အရေပြား ခြောက်သွေ့ခြင်းရဲ့ လက္ခဏာရပ်တွေက ဘာတွေလဲ?
အရေပြားခြောက်သွေ့ခြင်းရဲ့ အဓိက လက္ခဏာရပ်ကတော့ ယားယံခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ အရေပြားမှာ ကြမ်းတမ်းခြောက်သွေ့တဲ့ အနီကွက်တွေ ပေါ်ပေါက်လာတတ်ပြီး ၎င်းအကွက်တွေက ယားယံလေ့ရှိပါတယ်။ အရေပြားခြောက်သွေ့ခြင်း ပြင်းထန်လာခဲ့လျှင်တော့ အရေပြားပေါ်မှာ အက်ကွဲကြောင်းတွေ ပေါ်ပေါက်လာတတ်ပါတယ်။
ယားယံတဲ့အတွက်ကြောင့် ကုတ်ပါများတဲ့အခါ အရေပြားဟာ ထူလာတတ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ အနီရောင် အင်ပြင်တွေလိုမျိုး ထွက်လာတတ်ပါတယ်။ ကုတ်လိုက်လို့ ပေါက်ပြဲဒဏ်ရာ ရတဲ့အခါမှာလည်း ရောဂါပိုးတွေ ဝင်တတ်ပါတယ်။
ဘယ်အရာတွေကြောင့် အရေပြားခြောက်သွေ့မှု ပိုမိုဖြစ်ပွားတတ်သလဲ?
လေထုစိုထိုင်းစနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်က အရေပြားထဲမှာ ရေကို ထိန်းသိမ်းနိုင်စွမ်းအပေါ် များစွာ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် မကြာခဏလက်ဆေးခြင်း၊ အရက်ပြန်ဖြင့် ဆေးကြောခြင်းများကလည်း အရေပြား ခြောက်သွေ့မှုကို ဖြစ်စေပါတယ်။ သွေးပေါင်ချိန်ကျဆေး၊ သွေးအတွင်း ကိုလက်စရော အဆီကျဆေး၊ ဓါတ်မတည့်ခြင်အတွက် ဆေးဝါးတွေနှင့် ဝက်ခြံပျောက်ဆေးကဲ့သို့သော အချို့ဆေးဝါးတွေရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေက အရေပြား ခြောက်သွေ့ခြင်းကို ဖြစ်စေသလို အချို့သော အရေပြား ရောဂါတွေကလည်း အရေပြား ခြောက်သွေ့ခြင်းကို တွဲလျက်ဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။
ဓါတုဗေဒပစ္စည်းများစွာပါဝင်တဲ့ ဆပ်ပြာများ၊ ကြေးချွတ်ဆေးများ၊ သန့်စင်ဆေးရည်များအား ထိတွေ့ခြင်းကို ရှောင်ကျဉ်ရပါမယ်။
အရေပြား ခြောက်သွေ့ခြင်းကို ဘယ်လိုကုသမလဲ?
အရေပြားရဲ့ ရေဓါတ်ကို ထိန်းသိမ်းပေးတဲ့ lotion တွေ၊ oils တွေ၊ moisturizers တွေကို စွဲမြဲစွာ ပုံမှန် သုံးစွဲပေးခြင်းဖြင့် ကုသ ကာကွယ်နိုင်ပါသည်။
အရေပြားခြောက်သွေ့ခြင်းကို မကုဘဲနေလျှင် ဘာဖြစ်နိုင်သလဲ?
နှင်းခူကဲ့သို့ အရေ​ပြား ရောင်ရမ်းနာဖြစ်ခြင်း၊ အရေပြားခြောက်သွေ့ခြင်းမှ တဆင့် ဘက်တီးရီးယားပိုးများ ဝင်ရောက်ခြင်း၊ အရေပြား အရောင်ပြောင်းခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ ကံကောင်းတဲ့ အချက်ကတော့ အရေပြား ခြောက်သွေ့ခြင်းဟာ ပြင်းထန်လေ့မရှိဘဲ ၎င်းကို အလွယ်တကူကုသနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အရေပြားခြောက်သွေ့တာကို မပေါ့ဆဘဲ ဂရုတစိုက်ကုသပေးဖို့ အကြံပေးတိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။